घनश्याम भुसालको विश्लेषण : अहिलेको नेकपाले समाजवाद ल्याउँदैन | Ratopati
घनश्याम भुसालको विश्लेषण : अहिलेको नेकपाले समाजवाद ल्याउँदैन
दुई तिहाइको सरकार दलाल पूँजीवादको कि समाजवादको ?
personघनश्याम भुसाल exploreकाठमाडौं access_timeमाघ ७, २०७५ chat_bubble_outline0
त्यस भन्दा बाहिर अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामी प्रगतिशील कर लगाउनेछौँ। त्यसबाट एकातिर तलको मानिसलाई हामीले जागिरको ग्यारेन्टी गर्ने दिशामा जान्छौँ। कृषिलाई हामीले आधुनिकीकृत गर्छौ, औद्योगीकृत गर्छाै। पुग्न सक्ने बनाउँछौँ। यसो गर्दै जाँदा तलको वर्गलाई ‘इम्पावर’ गर्ने कुरा हुन्छ। एउटा यो तरिका हो। दोस्रो हामीसँग प्रगतिशील कर हुन्छ। यी दुई तरिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्न सक्छ । हाम्रोमा जन्मेका छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्छाै। रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छाैं। राम्रो बाटोमा मुलुक दश/पन्ध्र वर्ष हिँड्दै जाँदा त्यो अभ्यासले भूमिलाई सार्वजनिक स्वामित्वअन्र्तगत ल्याउने प्रक्रियामा, सामाजवादतर्फ हामी निरन्तर क्रमशः अगाडि बढ्दै जाने होला। योभन्दा बढी अरु केही गर्न सकिन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन।
तर राजनीति यो दिशातर्फ गएको छ कि छैन ? भन्ने कुरा सम्भवतः आजको धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न हो। यसरी हेर्दा आज हामी त्यतातिर गइसकेका छैनौँ। किनकि दलाल पूँजीवादलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले कति काम गरेका छौँ, भन्ने कुरा नै हामी त्यतापट्टि कति गएका छौँ भन्ने कुरा हो। पहिलेदेखि हामी कम्युनिष्ट भएकोले हामी फर्किनै परेन। हामी कम्युनिष्ट हौँ किन फर्किन पर्याे ?भन्ने एउटा कुरा होला। नत्र हाम्रा कामका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने दलाल पूजीवादलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले के गरेका छौँ ? सोचौं केही चिज। मेरो भनाईको अर्थ हो, हामीले त्यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक सोचौँ।
पूर्ण स्वतन्त्रताका साथ आ–आफ्ना ठाउँमा वार्डमा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र माथि समेत जब समाजवादका नीतिहरु के हुन् ? भनेर छलफल सुरु हुन थाल्छ, समाजवाद त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। जहिलेसम्म त्यो बनाउन सकिँदैन, समाजवादको सुरु हुदैन। समाजवादबारे छलफल अगाडि बढाउँछौ, तब मात्र समाजवादको सुरुवाद हुन्छ।
(नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले समकालीन विमर्श श्रृङ्खला ६ अन्तर्गत समकालीन नेपालमा समाजवाद शीर्षकको कार्यक्रममा भुसालले गर्नुभएको टिप्पणीको उतारको सम्पादित अंश। )